Uhlelo lokusebenza lwe-Photo Photo lwe-3D lwakha ukuxhumana ngesikhathi sokuhlukaniswa - i-LucidPix
I-3D Photo App Yakha Ukuxhumana Ngesikhathi Sokuhlukaniswa
Izwe ngalinye lavalwa ngesikhathi kuhlaselwa i-COVID-19, uLucid wayesanda kukhishwa uhlelo lwe-3D lokuhlela isithombe esisha ku-CES 2020, ebizwa ngokuthi yiLucidPix. Uhlu lokulinda lohlelo lokusebenza lomuntu ongu-1,000,000, 3 2 lwakhiwa ngenkathi ithimba lisebenza ukuthuthuka kubuchwepheshe bokuqamba (i-AI) nokuhlaziya ulwazi lomsebenzisi lohlelo lokusebenza. Ngomqondo engqondweni ukuvumela abadali ukuthi baziveze kahle futhi bahlanganyele online, impendulo evela kwabahloli be-beta ibalulekile. Uhlelo lokusebenza lizizwe libaluleke kakhulu kunanini ngaphambili njengoba abasebenzisi abaningi bevinjelwe ukusebenza ngokuzumayo, ukufunda nokubandakanya bonke kusuka kusikrini esicwebile, esimile kabili. Izithombe ze-immersive XNUMXD zizokwazi ukuxhuma umndeni nabangane ngendlela abangakwazanga ukuxhumana ngayo phambilini. Lapho izithombe ziyavela esikrinini, kunokuphila okuthile okungekho nje ezithombeni ezijwayelekile ze-XNUMXD.
U-CEO kanye nomsunguli we-Cooper uHan Jin bakubonile lokhu kanye nokuxhumana okubandakanya okukuhlinzekayo; “Manje, kunanini ngaphambili, abantu bafuna indlela yokuphunyuka besebenzisa imisebenzi eku-inthanethi ngenkathi behlala ekhaya. Njengoba saphoqelelwa ukuthi sichithe isikhathi sethu esiningi ku-inthanethi, sesinemikhawulo yokuthi siziveza kanjani, ”kusho uJin. "Ngesikhathi sokungaqiniseki, sijabule kakhulu ukuthi singanikeza abantu ithuba lokuvumela ukuthi bahlanganyele lokho abakubona ngempela nomndeni nabangane ngayo yonke le mikhakha."
Ngenkathi amazwe manje eseqalile ukuvuselela, abantu abaningi basaxakene ukuzibandakanya ekuxhumaneni nomphakathi “okujwayelekile,” futhi singaphinde sibhekane nalokhu ukuwahlukanisa — akekho onesiqiniseko sangempela sokuthi yini engenzeka ngokulandelayo. Noma ngabe kusetshenziselwa usuku nosuku phakathi komndeni nabangane abasakazeka emhlabeni wonke futhi babelana ngolwazi lwabo, noma ukuxhumana okuyingqayizivele ngesikhathi lapho izinketho zethu zokuxhumana nabantu zinqunyelwe, uLucidPix unikeza okuphumayo okudala okungekho nje kwenye indawo.
I-LucidPix isiyatholakala ukulanda i-Android ne-iPhone. Uhlelo lokusebenza linikeza ukuguqulwa kwesithombe okungenamkhawulo kwe-3D nokuhlela, ukufinyelela okukhethekile komphakathi weLucidPix, kanye nokwabelana kuzithangamu eziningi zemidiya yezokuxhumana kanye nemiyalezo, ngezibuyekezo ezingaphakathi nohlelo ezivula uhla lwezinto ezithuthukile.
Chofoza ukuze ulande uLucidPix
I-LucidPix Iqala Futhi Abasebenzisi Abayisigidi →← Ungayithola Kanjani Ababukeli Benyanga abayi-100K ku-Pinterest Kwinyanga eyodwa
Ungayithumela kanjani Indaba ye-Instagram ku-3D
Amathiphu Wokuthatha izithombe Zasendle Somaphakathi
Abadali be-GIF abaphambili abahlanu
Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela e-Indonesia!